तपाइँको एसईओ को लागी SWOT विश्लेषण कसरी गर्ने भन्ने बारे Semalt सल्लाह
SWOT विश्लेषण एक शब्द हो जुन तपाईले आउनु भएको हुनुपर्छ तपाईको सामर्थ्य, कमजोरीहरू, अवसरहरू, र खोजीमा खतराहरूको विश्लेषण गर्दा। मार्केटरहरूको रूपमा, तपाईं SEOको पहलका लागि लगातार तपाईंको औंलाहरूमा हुनुहुन्छ जुन अन-साइट र अफ-साइट अप्टिमाइजेसन रणनीति र डाटाको भारी मात्रामा आधारित प्रदर्शन गरेको कार्यहरूको कहिल्यै अन्त्य हुने सूची हुँदैन।
तपाईंको निपटानमा सीमित संसाधनहरूको साथ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले आफ्नो ध्यान केवल ती लगतहरूमा केन्द्रित गर्नुहुनेछ जुन तपाईंको लगानीमा ठूलो प्रतिफल प्रदान गर्दछ। तपाईंले सब भन्दा महत्त्वपूर्ण गर्नु पर्ने चीजहरूको सूचिलाई संकुचित गर्ने एक तरिका तपाईंको वेब उपस्थितिको SWOT विश्लेषण सञ्चालन गर्नु हो। एक SWOT विश्लेषणले कुञ्जी शब्दबाट सामग्रीमा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गर्दछ, र त्यस्तै। एसईओ को लागी एक विस्तृत SWOT आयोजित गर्नाले एक विस्तृत रोडम्याप कोर्दछ जुन तपाईंलाई महत्वपूर्ण कार्यहरू कसरी व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेको सही दिशामा औंल्याउँछ।
जबकि कीवर्ड अनुसन्धान एक चलिरहेको गतिविधि हो, हामी केवल कुञ्जी शब्दहरूमा SWOT विश्लेषण गर्न सक्दछौं। यो गर्नाले हामीलाई बृहत्तर एसईओ दृष्टिकोण लिन मद्दत पुर्‍याउँछ विश्लेषणलाई यस अवस्थामा अवश्य लक्षित कुञ्जी शव्दहरूको परिभाषित सेटमा आधारित छ।
तपाइँको एसईओ शक्तिहरु पत्ता लगाउँदै
एक कारक खोज ईन्जिन तपाईको जैविक खोज दृश्यता निर्धारण गर्न प्रयोग गर्दछ तपाईको सामर्थ्य र अधिकार विषेश विषय वा कुञ्जी शब्दहरूको समूहमा। यसले ती कुञ्जी शब्दहरूको पहिचान गर्दछ जसको लागि तपाईंले पहिले नै यसको प्रयोगकर्ताहरूको नजरमा केही स्तर अधिकार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, जसले हामीलाई यो निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ कि तपाईंको गति तपाईंको ध्यान केन्द्रित गर्न एक उत्कृष्ट क्षेत्र हो।
कुनै विशेष विषयमा अख्तियार बन्न गाह्रो हुँदै गइरहेको छ, र यो स्थापित गर्न समय चाहिन्छ, त्यसोभए तपाईंसँग जे छ त्यसमाथि निर्माण नगर्नुहोस्। जब तपाईं आफ्नो सामर्थ्यमाथि निर्माणको लागि सेट अप गर्नुहुन्छ, पहिलो प्रश्न तपाईंले सोध्नु पर्छ: "मसँग अहिले कुन सामग्रीहरू छन् जुन मेरो प्राथमिक खोजशब्दहरूको लागि राम्रो छ?" यहाँ, रैंकिंग राम्रोसँग सँधै वेबपृष्ठ हुँदैन जुन SERP को पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो पृष्ठमा देखा पर्दछ। यो वेबपृष्ठहरू हुन सक्दछ जुन SERP को पहिलो २० पृष्ठहरूमा रैंक हुन्छ।
तपाईंसँग अवस्थित सामर्थ्यहरू छन् भनेर पहिचान गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई तीन मध्ये एक तरिकामा लाभ उठाउनुहोस्:
तपाईंको साइटमा उत्तम सामग्रीहरू लिंक वा बाहिर लिंक गर्न नयाँ अवसरहरू खोज्नुहोस्। तपाइँको एसईओ प्रयास को लागी दोहोरो फाइदा हुन सक्छ कि तपाइँको कडा सामग्री लाई सुदृढ पार्छ जबकि तपाइँको दर्शकहरु लाई को लागी धेरै किसिमका प्रश्नहरुको विस्तृत विस्तृत उत्तर प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि मजबूत टुक्रा को अधिकार मा piggybacks।
-औं र २० औं SERP पृष्ठहरूको बीचमा सबै वेबपृष्ठहरूमा पूर्ण पृष्ठ कुञ्जी शब्द, लिंक, र टेक्निकल अडिटहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्। अडिट पछि, हामी क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सक्दछौं जहाँ सुधारहरू गर्न सकिन्छ।
"निर्धारण" अवतरण पृष्ठहरू सहि कुञ्जी शव्दहरूको लागि स्तर निर्धारण गर्दै छन् भने हामी निर्धारण गर्दछौं। कहिलेकाँही पृष्ठ गलत वा अनावश्यक कुञ्जी शब्दका लागि श्रेणीकरण हुन सक्छ। जहाँसम्म तपाईको ल्यान्डि pages पृष्ठहरू तपाईका धेरै कुञ्जीशब्दहरूको लागि वर्गीकृत गर्नु ठूलो हुन सक्छ, तपाईसँग कम रूपान्तरणहरू हुन सक्छ किनकि यो इष्टतम होइन, र आगन्तुकहरूले उनीहरूलाई आवश्यक उत्तरहरू खोज्नको लागि क्लिक र खोजी गर्न पर्ने हुन्छ। यसको सट्टामा, हामी यो निर्धारण गर्दछौं कि तपाईको कुन वेबपृष्ठले सब भन्दा राम्रो उत्तर प्रदान गर्दछ र यसलाई अनुकूलन गर्नुहोस् हालको होमपेजले ओगटेको स्थिति कब्जा गर्न।
हामी तपाईंको सब भन्दा बलियो सामग्रीको प्रकारहरू र सुविधाहरूमा ध्यान दिन हामी सावधान छौं किनकि तिनीहरू चलचित्र बनाउनको लागि सबैभन्दा उपयुक्त सामग्रीको संकेत गर्दछ। उदाहरणको लागि, यदि तपाईंसँग भिडियोहरू छन् जसले यूट्यूब र गुगलमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्, हामी अधिक भिडियोहरू सिर्जना गर्दछौं। यदि तपाईंको सामग्री ब्लग पोष्टहरू द्वारा SERP मा तल धकेल्दछ भने, हामी अधिक ब्लग पोष्टहरू सिर्जना र प्रकाशित गर्दछौं।
तपाईको कमजोरीहरूबारे जान्ने
तपाईको सामर्थ्य एक्लै जान्ने पर्याप्त छैन; तपाईंले आफ्नो खोज कमजोरीहरू पनि पत्ता लगाउनु पर्छ। प्रत्येक वेबसाइटमा कमजोरीहरू हुन्छन्, र जब यो एसईओको कुरा आउँछ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले तिनीहरूलाई चाँडै चिन्नु आवश्यक छ ताकि हामी तपाईंलाई धेरै समय, प्रयास, र पैसा बचाउन सक्नेछौं।
कुञ्जी शब्द र सामग्री
जबकि त्यहाँ आवश्यक कुञ्जी शब्द समूहहरू छन्, त्यहाँ कुञ्जी शब्दहरूका समूहहरू पनि छन् जुन धेरै समय र प्रयास चाहिन्छ। यस्तो कुञ्जी शब्द समूहहरूलाई जान दिनु महत्त्वपूर्ण छ। सामान्यतया, SERP परिणामहरूको द्रुत समीक्षाले कुञ्जी शब्दहरूलाई संकेत गर्दछ जुन आकार, उमेर, प्रतिष्ठा, र सामग्रीको गुणस्तरको आधारमा तपाईंको पहुँचबाट टाढा छ। यस अवस्थामा, विकल्पको रूपमा विशिष्ट लामो-पुच्छ्न कुञ्जी शव्दहरूमा भर पर्न आवश्यक पर्दछ। अर्को समाधान दृश्यता, रूपान्तरण, र यातायात, जस्तै पीपीसी उत्पादनको अन्य तरिकाहरूमा विचार गरिनेछ।
सजिलैसँग सुधार गर्न सकिने कमजोरीको अर्को सामान्य क्षेत्र तपाईंको वेबपृष्ठहरूमा सामग्रीको गुणवत्ता हुन सक्छ। यो कुञ्जी शब्द प्रासंगिकता, गहिराई दृष्टिकोण, र प्राविधिक/संरचनात्मक कारकबाट भिन्न हुन्छ। जब हामी तपाईंको वेबसाइटमा कमजोरीका क्षेत्रहरू पत्ता लगाउन थाल्दछौं, हामी एक अडिट गरेर शुरू गर्दछौं। एक लेखा परीक्षण गर्नका लागि प्रयोग गर्ने साधनहरू मध्ये एक गुगल लाइटहाउस हो। यो वेबपेजहरू, लिंकहरू, कोडहरू, ट्यागहरू, कुञ्जीशब्दहरू, र धेरै अन्य क्षेत्रहरूमा फेला पारिएको मुद्दाहरू र त्रुटिहरूको प्राथमिकता सूची प्रदान गर्दछ।
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, हामी पृष्ठहरूमा फेला परेको कुनै पनि समस्याहरू खोजी ईन्जिन नतीजाहरूको आधारमा उच्च स्तरको अधिकारको साथ तय गरेर सुरू गर्दछौं। एकचोटि हामीले यी वेबपृष्ठहरू सिद्ध गरिसकेका छौं, हामी उनीहरूको रणनीतिक महत्त्वको आधारमा अन्य प्राथमिकता वेब पृष्ठहरूमा जान सक्दछौं।
ब्याकलिks्कहरू जुन जैविक रूपमा प्राप्त गरिन्छ र उच्च गुणवत्ताको हुन्छ अझै पनी महत्त्वपूर्ण र्यान्क कारकहरू छन्। तिनीहरूले साइटको अधिकार विस्तार गर्नमा धेरै गर्न सक्छन् जुन तिनीहरू लि they्क छन्। कुञ्जी शब्द अनुसन्धान जस्तै धेरै थर्ड पार्टी टूलहरू हामीले ब्याकलिksक्स कहाँ राख्नुपर्दछ भन्ने स्थिति देखाउँदै महान छन्।
यी उपकरणहरूले तपाईंको सब भन्दा बलियो प्रतिस्पर्धी को backlink स्रोतहरु मा मूल्यवान अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ। जब सम्भव हुन्छ, हामी पहुँच गर्न सक्दछौं र ती स्रोतहरूबाट लिंकहरू प्राप्त गर्न सक्दछौं।
तपाईंको एसईओ अवसरहरूमा ठूला ठूलाहरू
ती मानिसहरू जो कहाँ र के खोज्ने भनेर जान्दछन्, त्यहाँ धेरै SEO अवसरहरू छन्।
SEMrush र Ahrefs जस्ता उपकरणहरूले वेब विशेषज्ञहरूलाई शीर्ष-स्तर निर्धारण कुञ्जी शब्दहरू र सामग्रीहरू पत्ता लगाउने अवसर प्रदान गर्दछ। ती सामग्रीको अन्तराल पत्ता लगाउन पनि मद्दत गर्दछ जुन हामीलाई एक ठूलो सम्झौतामा गुमाउनु पर्ने हुन सक्छ। यी उपकरणहरूले अनुमानित मासिक खोज खण्डहरू, सापेक्ष प्रतिस्पर्धा, र जैविक यातायातको आधारमा उच्च-मूल्य कुञ्जी शव्दहरूको प्राथमिकता सूची पनि सिर्जना गर्न सक्दछन्। यो एक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर हो जुन तपाईले आफ्नो दिमागलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ: "मेरो प्रतिस्पर्धाको मँति कुन उच्च-मूल्यको कुञ्जी म होइन भनेर?"
यस विश्लेषणको अंशमा सम्भावित रिटर्न वा जैविक दृश्यता स्थापनाको फाइदाहरूसँग सम्बन्धित उच्च अधिकार स्थिति प्राप्त गर्न आवश्यक प्रयासको स्तरलाई विचार गर्नु समावेश छ। यो अवसर महत्त्वपूर्ण छ भने हामीले विश्लेषण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
कुञ्जी शब्द र सामग्री अन्तरहरू पत्ता लगाउने अर्को विधि भनेको तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूको साइटहरूको अडिटिंग हो। हामी उनीहरूको प्राथमिक पृष्ठहरूको अध्ययन गर्न समय खर्च गर्दछौं र तिनीहरूका कुञ्जीशब्दहरूको प्रयोग अवलोकन गर्दछौं र कसरी तिनीहरूले ती शीर्षकहरूलाई ट्याग, र हेडि useहरूमा ती कीवर्डहरू प्रयोग गर्छन्। उनीहरूको आन्तरिक लिंक संरचना पनि अवलोकन गर्नुहोस्। यो गरिरहँदा, हामी तिनीहरूको गल्तीहरू हटाउँछौं र तपाईंको साइटमा यी नयाँ खोजहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उत्तम SEO अभ्यासहरू अनुसरण गर्दछौं।
त्यहाँ तीन प्राथमिक स्रोतहरू छन् जुन हामी भर पर्दछौं जब हामी गुणवत्ता इनबाउन्ड लि get्कहरू प्राप्त गर्न आवश्यक हुन्छ:
हाम्रो लक्षित कुञ्जी शव्दहरूको लागि खोज इञ्जिन परिणामहरू। हाम्रो प्राथमिक कुञ्जी शव्दहरूको लागि SERP शीर्ष गर्ने वेबसाइटहरू प्राकृतिक सुरूवात बिन्दु हुन् किनकि यी वेबसाइटहरू न केवल खोज इञ्जिनसँग सान्दर्भिक छन् तर तपाईंको वेबपृष्ठहरूमा पनि सम्बन्धित छन्। तपाइँको अगाडि रँकिंग साइटहरूले सायद त्यसो गर्दछन् किनभने तिनीहरूसँग उच्च अधिकार रहेको छ जसले तपाईंलाई फाइदा गर्न सक्दछ यदि तपाईंले तिनीहरूबाट लि get्क प्राप्त गर्नुभयो भने। हामी कुनै पनि प्रतिस्पर्धी ब्याकलिंक अवसर खोज्छौं जस्तै निर्देशिका, सम्बद्ध सूचि, वा ब्लग र लेखहरूमा टिप्पणी गर्न।
गुगल खोजी कन्सोल लिंक रिपोर्ट। ब्याकलिink्क अनुसन्धानका लागि भ्रमण गर्नको लागि यो अर्को उत्तम स्थान हो किनकि यसले गुगलले तपाईंको सामग्रीसँग लिinking्क गर्ने डोमेनहरूलाई कुन कुरा बुझाउँदछ। यहाँ, हामी लि your्कहरूको शुद्धता र गुणवत्तालाई प्रमाणित गर्न सक्छौं तपाईंको साइटमा हालै ट्राफिक पठाउँदै। हामी यसलाई पनि यी प्रयोगक्षेत्रहरूबाट लि obtain्कहरू प्राप्त गर्नका लागि अन्य आशाजनक अवसरहरू जाँच गर्न प्रयोग गर्न सक्छौं।
कमजोरीहरूमा उल्लेख गरे बमोजिम, हामी धेरै ब्याकलिink्क उपकरणहरू प्रयोग गर्दछौं आशाजनक ब्याकलिंक स्रोतहरू पहिचान गर्नका लागि जहाँ तपाईं आफ्नो प्रतिस्पर्धामा लिंकहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यी मध्ये केही उपकरणहरूले लि links्कहरूको अधिकारलाई क्रमबद्ध गरेर प्रत्येकको मूल्य र सम्भावित श्रोतको प्राथमिकतामा यसलाई अगाडि बढाउँछन् जसले हामीलाई धेरै समय बचत गर्दछ।
खोजीमा तपाईंको प्रभुत्वलाई के खतरा पार्दछ भनेर जान्दै
त्यहाँ केहि चीजहरू वा कार्यहरू छन् जुन तपाईको जैविक अधिकारलाई ईन्जिन बट्समा खोजी गर्न सक्ने खतरा हुनेछ। यी कार्यहरू जानबुझी वा गल्ती हुन सक्छ तर तपाईंलाई खतरामा ल्याउन सक्छ र सम्भावित हानीकारक दण्डहरू। हाम्रो लेखा परीक्षणले यी खतराहरूलाई माछा मार्छ र तिनीहरूलाई निष्पक्ष पार्छ यस अघि उनीहरूले महत्वपूर्ण वा अपरिवर्तनीय क्षति हुन सक्दछन्।
तपाईंको SEO SWOT विश्लेषण र डाटा हातमा छन्, हामी तपाईंको साइट सीमित मुद्दाहरूको समाधान गर्न काम गर्न सक्दछौं। हामी तपाईंको नयाँ निर्माणको लागि नयाँ फेला परेका अवसरहरूको फाइदा लिन र तपाईंको जैविक दृश्यता बढाउन सक्दछौं। यो पक्कै तपाइँको ब्रान्ड को अधिक यातायात र राजस्व मा ड्राइव गर्नेछ।
त्यसकारण हामी हाम्रो ग्राहकहरुलाई त्रैमासिक वा अर्ध-वार्षिक आधारभूत मा SWOT सञ्चालन गर्न सल्लाह मापन गर्न को लागी सफलता मापन गर्न को लागी र केहि पनि समस्या छ कि माछा पनी।